Igciwane lesampula elilahlwayo
Alahlwayo earloop nokunwebeka ...
Imaski yobuso bezokwelapha elahlwayo
Izinto zokusetshenziswa zemaski yokuhlinzwa elahlwayo inikezwa ngamafektri wemikhiqizo yendabuko, ekhiqiza izinto zokwelapha zesikhathi eside, futhi ikhwalithi iqinisekisiwe. Futhi, iziqu ezifanele zezinto zihlangabezana nezinga lokuphathwa kohlelo lwe-EN14683. Ikakhulukazi, into emaphakathi incibilika ishaywa ngamagremu angama-25 ngemitha eyisikwele futhi i-BFE (iBacterial Filtration Efficiency) ingama-99% ngaphezulu, enikezwa yiSinopec, ebizwa ngokuthi ukuncibilika okuhle kakhulu okushaywe i ...
Ibhande le-earloop nokunwebeka okulahlwayo
Inkampani yethu ingenise imishini yokukhiqiza yobuchwepheshe nobuchwepheshe obuthuthukile bokukhiqiza ibhande le-loop lendlebe. Izinto ezibonakalayo eziyinhloko yi-chinlon ne-spandex. Singanikela ngemibala ehlukahlukene yendlebe yeluphu. Le band yendlebe yeluphu inombala omhlophe, futhi ububanzi bungu-3mm oyindilinga. Ifanele uhlobo oluthile olulahlwayo lwamaski obuso bezokwelapha noma bokuhlinzwa. Imvamisa, ibhande lezindlebe lezimaski zobuso, amandla alo angama-17 N. Sinezikhwama noma amaphakethe we-rolls Ukuthumela kungenziwa nge-air express ngokushesha. Okwe ...
Inhloso nencazelo yesampuli yegciwane lesampula 1. Isetshenziselwa ukuqoqwa kanye nokuthuthwa komkhuhlane wasemitholampilo, umkhuhlane wezinyoni (njenge-H7N9), igciwane lesandla unyawo, isimungumungwane nezinye izibonelo zamagciwane kanye nezimodeli ze-mycoplasma, ureaplasma kanye ne-chlamydia 2. Amagciwane namasampuli ahlobene nawo ayagcinwa futhi athuthwe kungakapheli amahora angama-48 esesimweni esiqandisini (2-8 degrees). I-3.Virus namasampula ahlobene agcinwe ku- -80 degrees noma ku-nitrogen ewuketshezi isikhathi eside. Isaziso Esikhethekile: A) Uma i-colle ...
Singanikeza uswidi we-gummy onezithelo ezimibalabala, futhi, uswidi owenziwe ngokwezifiso uyamukelwa. Singumkhiqizi woqobo onefektri yakhe, enikela ngentengo yefektri eshibhile nekhwalithi ephezulu. Okubalulekile okusetshenzisiwe kukaswidi we-gummy yi-carrageenan, isiraphu ye-maltose, i-xylitol, impuphu yezithelo eyenziwe ngezifiso, nokunye ukudla kokudla. Singanikela ngemodeli yesimo sebhere, amanye amamodeli wokuma enziwe ngezifiso, futhi enziwe izinsuku ezingama-20. Kuze kube manje, imibala yombala obomvu we-cherry, ophuzi kalamula, oluhlaza okotshani, oluhlaza okwesibhakabhaka, nophephuli ...